စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခန္တီးခရိုင်အတွင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင် ၃၇၀ ကျော်တို့ဟာ ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ မနေ့က စာတင်လိုက် ကြကြောင်း ပြောပါတယ်။
နာဂစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးရှူမောင်ကို NLD ဗဟိုက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကနေ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မပေးတာကြောင့် ခရိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေက ပါတီဝင်တွေက နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခန္တီးခရိုင်ဥက္ကဌ ဒေါ်ဆယ်ဆယ်နောင်က ပြောပါတယ်။
"ဦးရှုမောင်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မရလို့ဆိုပြီးလိုက်ထွက်တာပါရှင့်၊ ၃၇၅ ယောက်ပါရှင့်၊ ဗဟိုကိုတင်ထားပါတယ်၊ ဒီ ၃၀၀ ကျော်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် အတွက်နဲ့ နေရာမရလို့ ဆိုပြီးနှုတ်ထွက်ကြတာပါရှင့်၊ ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး၊ နေရာအတွက်က ပထမလား၊ အဖွဲ့ချုပ်တွက်က ပထမလား"
ဦးရှုမောင်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ခန္တီးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အမည်တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် နေရာကို ခန္တီးနဲ့ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွေကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ NLD ဗဟိုက တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို တာဝန်ပေးတာကို လက်မခံနိုင်တာကြောင့် ဦးရှုမောင်ဟာ ပါတီ ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းက နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီးနောက် ပါတီဝင်တွေဖြစ် ကြတဲ့ နာဂ တိုင်းရင်းသားတွေက အခုလို နှုတ်ထွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရှုမောင်ဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လျှောက်လွှာတင်ချိန်ကမှသာ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ပါတီဝင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ခန္တီးခရိုင်အတွင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဝင်ပေါင်း ၆၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
in NLD GIANT,and advantaged people appear. beware.
ကိုယ်စားလည် လောင်းရွေးတာ ဟာ ပါတီ နဲ့ နိုင်ငံ ရဲ့အနာဂါတ် အရေး ကို ကြည့်ပြီးရွေးရတာ ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု မှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ရုံ မိမိတို့နေရပ် က သိတဲ့ လူ ဖြစ်ရုံလေး နဲ့ ရွေးရင် ရေရှည် အတွက် မကောင်းပါဘူး။ လွတ်တော် ကိုယ်စားလည် ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်နေရပ် အရေးတင်မကဘူး တပြည်လုံးအရေး ပြည်ပနဲ့ဆက်ဆံ ဖြေရှင်းနိုင် ရေး စတဲ့ ဘက်စုံ အရည်အချင်း ရှိနိုင်တဲ့ လူကို ရွေးနိုင်မှ ရေရှည် အတွက်ကောင်းမှာပါ။ လောလောဆယ် ကိုယ့် နေရပ်မှာ ဒီလိုလူမျိုး မတင်နိုင်သေးရင်တော့ ဒေါ်စု ပြောတဲ့ အတိူုင်း လူ ကိုမကြည့်ပဲ ပါတီ နဲ့ နိုင်ငံ အတွက်ကြည့်ပြီး မဲပေးရမှာပဲ။ တချို့ဟာ စိတ်အားပြင်းပြတာ မှန်ပေမဲ့ ပညာရေးတောင် မပြီးဆုံးခဲ့ကြ ရတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ (အထူးသဖြင့် ပြည်ပ) ဝင်ဆန့်မှုအားနည်းရင် ခေါင်းဆောင်ပြီပြီ သသ နိုင်ငံ အကျိုးလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အနစ်နာ ခံခဲ့တဲ့ လူကို နေရာရစေချင်တဲ့ စိတ်ထား ကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
Aug 10, 2015 09:15 PM
If you all resign, govt will be happy.
Aug 10, 2015 05:23 AM
Aug 09, 2015 10:48 PM
ကျရာနေရာကနေ ပါတီအကျိုး ပြည်သူ့ အကျိုး ကို သယ်ပိုးဘို့ထက် ကိုယ့် အတွက် ပထမ ထားတဲ့ လူတွေ စောစောထွက်တာကောင်းပါတယ် မတားပါဘူး စောစော သိရလို့ပိုတောင် ဝမ်းသာဘို့ကောင်းသေးတယ်။
Aug 09, 2015 08:40 PM